मधुपर्क जेठ, २०६९ उपनामको खोजी - प्रकाशप्रसाद उपाध्याय केही दिन अघिको कुरो हो । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा केही साथीहरू बसेर चियापान गर्दै थियौँं । टेबुलमा भएको पत्रिकाको एउटा लेख देखेर एकजना साथीले मलाई घचघच्याउँदे भने - यार, मलाई तिम्रो आचारव्यवहार देख्दा अचम्म लाग्दछ । मैले सोधेँं - त्यस्तो के भयो भाइ ?
भन्न थाले - तिमीले यत्तिका वर्षदेखि लेख, निबन्ध र हास्यव्यङ्ग्य आदि केही न केही लेखिराखेका देख्दछु तर कुनै उपनाम बिना । कुनै उपनाम किन राख्दैनौ ? उपनाम बिनाको लेखकको त्यत्ति विघ्न धाक हुँदैन ज्ास्तो लाग्छ । मैले भनेंँ - हो र ? त्यस्तै हो भने हुन्छ । सोचँूला । सोचूँला होइन, सोची हाल्ने । नयाँ वर्षको पहिलो रचना उपनामका साथ छापिनु पर्छ । बुभ\_mयौ - साथीले भने ।
मेरो उपनामका लागि उनको चिन्ताका लागि धन्यवाद दिंँदै भनेंँ - उसो भए तिमी भन न कुन उपनाम ठीक होला ? पहिले तिमी नै भन । तबसम्म म सोच्दै गर्छु । बरू त्यतिन्जेल तातो कफीको अर्डर देउ न । चिया सकिएको गिलास पर सार्दै उनले भ�